बिमा कम्पनीले बोनस र हकप्रदको बाढी ल्याउने, कुन कम्पनीको कति आउँदैछ ?
काठमाण्डौ । बिमा समितिले नयाँ निर्देशिकामार्फत बिमा कम्पनीहरुलाई ०७५ असार मसान्तसम्म चुक्तापूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएसँगै बजारमा बिमा कम्पनीहरुको कारोबार बढिरहेको छ । कम्पनीहरुले हकप्रद ल्याउने र कतिपय राम्रो नाफा गर्नेहरुले राम्रो बोनस समेत दिएर पूँजी बढाउने भन्दै लगानीकर्ता बिमा कम्पनीहरुप्रति आकर्षित देखिएका छन् । बिमा...
कुन बिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी कति ? को बलियो, को दुर्बल ?
काठमाण्डौ । शुक्रबार बसेको बिमा समिति बैठकले बिमा कम्पनीहरुको चुक्तापूँजी साबिकको व्यवस्था भन्दा चार गुणाको दरले वृद्धि गर्न २०७५ को असार मसान्तसम्मको म्याद दिएपछि यसले बजारमा तरंग पैदा गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार जीवन बिमा कम्पनीको अब न्यूनतम चुक्तापूँजी २ अर्ब हुनुपर्नेछ भने निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी १ अर्ब...
माओवादीकालमा जेल परेका घिमिरे बिमा समितिको अध्यक्ष
काठमाण्डौ । सरकारले बिमा समितिको अध्यक्ष डा. रविन्द्र घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले माओवादी कार्यकर्ता समेत रहेका डा. घिमिरेलाई बिमा समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन बिमा समिति अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीको कार्यकाल पुस ७ गतेदेखि सकिएपछि सो पद रिक्त थियो । बिहीबारको...
आउँदैछ नयाँ बिमा ऐन, जीवन बिमाको ४ र निर्जिवनको ५ अर्ब चुक्तापूँजीको प्रस्ताव
काठमाण्डौ । बिमा कम्पनीको हालको चुक्तापूँजीलाई २० गुणासम्म बढाउने प्रस्तावसहितको नयाँ बिमा ऐनको मस्यौदा अगाडि बढेको छ । यति धेरै चुक्तापूँजी वृद्धिको प्रावधानसहितको मस्यौदामाथि अर्थमन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको हो । बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुको जोखिमबहन क्षमता बढाउन र उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन हालको चुक्तापूँजीमा २०...